‘Gool dhalin la’aanta oo kalsoonidarro ku riday Ozil’ – Damqo
‘Gool dhalin la’aanta oo kalsoonidarro ku riday Ozil’
Ciyaaaryahanka khadke dhexe uga dheela kooxda Arsenal, Mesut Ozil ayay kalsoonidarro haysataa ka dib markii ay abaar gool la’aan ah ku dhacday siddeedii ciyaarood ee u dambeeyay, sida uu sheegay tababaraha Arsenal, Arsene Wenger.
Ozil oo kooxda ugu fadhiya qiimihii ugu sareeya ee ay abid ciyaartoy soo siisato oo ah 42 milyan oo gini oo ay kagala soo wareegtay Real Madrid 2013kii ayaa la daalaa dhacaya in uu wax saamayn ah ku yeesho ciyaarihii u dambeeyay.
Laacibkan reer Jermal oo 28 jir ah ayaan wax gool ah u dhalinin kooxda Arsenal tan iyo 10kii bishii Desembar.
“Ma garanayo sababta uu sidan liidata ugu ciyaarayo – laakiin way dhici kartaa,” ayuu yiri Wenger oo kooxdiisu ay Arbacada booqan doonto kooxda Bayern Munich oo ay la yeelan doonaan ciyaar ka tirsan koobka Champions League wareegiisa 16ka.
Ozil ayaa shan gool dhaliyay, hal gool oo kali ah ayuuna ka hooseeyaa goolashii uu kooxda u saxiixay xili ciyareekii hore oo lix ahaa, wakhtigaas ayaana ahaa wakhtigii uu goolasha ugu badan u dhaliyay kooxda.
Si kastaba ha ahaatee siddeedii ciyaarood ee u dambeeyay wax gool ah ma uusan dhalinin tan iyo markii ay Arsenal gurigeeda kaga badisay kooxda Stoke oo marti u ahayd oo ay 3-1 ku garaacday, markaas oo Arsenal ay hogaanka u qabatay Horyaalka Ingiriiska.
Arsenal ayaa laga badiyay afar ka mid ah ciyaaraha uusan goosha u dhalinin Ozil, waxayna dib ugu dhaceen kaalinta saddexaad iyaga oo 10 dhibcood ka hooseeya kooxda Chelsea oo hogaanka haysa.
“Waxaa la joogaa wakhtigii uu mar kale goolal dhalin lahaa” ayuu hadalka ku sii daray Wenger, oo kooxdiisu ay 2-0 kaga badisay Hull City Sabtidii, ka dib markii uu labo gool u dhaliyay Alexis Sanchez.
Previous EPL: Sanchez oo guul ku hoggaamiyay kooxda Arsenal
Next Macalin Zidane oo amaan huwiyay xidigiisa James Rodriguez